Ao anatin 'ny zava-manahiran-tsaina anay, izay miteraka adin-tsaina tsy misy fiafaran-tena, te-hahatsapa fa vehivavy tena faran'izay ratsy - malefaka, mampihetsi-po, mahafinaritra. Noho izany, tsy vetivety dia ny akanjon'ny fiambenan'ny vehivavy maoderina sisa no sisa tavela amin'ny akanjon'ny Majy. Raha ny marina, ity akanjo ity dia mamela antsika tsy hitovy amin'ny vehivavy araka izay tratra ihany, fa indrindra koa tena mahasoa indrindra haneho ny fahamendrehan'ny tarehinareo sy hanarona ny tsy fahampiana. Na izany aza, rehefa mifidy akanjo dia misy zava-dehibe iray hafa - tokony hifanaraka amin'ny fironan'ny lamaody maoderina izany. Noho izany, inona ny fitafiana amin'ny lamaody amin'ny taona 2014?
Casual dress: fashion 2014
Tamin'ity taona ity, ireo mpanakanto manana trano lamaody dia nanantitrantitra ireo hevi-dehibe vitsivitsy:
Amin'ny lamaody, "mifangaro" fitafiana, izany hoe, modely izay mampiavaka ny fitaovana sy loko isan-karazany, na ahitana tsikombakomba tsy ampoizina. "Chip" amin'ny vanim-potoana - akanjo amin'ny ornamenta eo amin'ny sisiny na eo afovoany.
Ny lamaody mody amin'ity taona ity dia akanjo sy lacy akanjo. Ho fanomezam-boninahitra ny filalaovana fanafody, ary koa ny karazana fitambarana karazana. Ny fankasitrahan'ny mpahaikanto manokana dia mahafinaritra ny akanjon'ny lantihy miloko mareva-doko, vita amin'ny fifanandrinana.
Indray mandeha any amin'ny tampon'ny lamaody akanjo lamaody, miaraka amin'ny safidy nomena ny mainty sy beige, na ny loko ny divay. Ny fiovan'ny tany am-piandohana tamin'ity taona ity dia ny famoronana hoditra sy dantelina.
Raha ny famaranana - ireo mpanamboatra dia manolotra fombafomba mahatalanjona amin'ny safidy - avy amin'ny akanjo tranainy, akanjo trapezoid-shaped sy retro ny la 60 ho an'ireo fanavaozana tsy azo antoka, toy ny akanjo-peplos, felam-paty sy akanjo akanjo.
Amin'ny loko loko, ny toe-draharaha ihany koa dia toa demokratika tokoa. Ohatra, ny akanjo ana-akanjo amin'ny lamaody 2014 dia manoro hevitra ny fisafidianana ny loko volomparasy, burgundy na amin'ny printy geometrika. Mankasitraka, manao akanjo maotina amin'ny loko tsotra ny loko marevaka, manantitrantitra tsara ilay sary. Models, sarotra ho an'ny manaitra, modely amin'ny glitter, vita amin'ny sata, seza, hoditra ary hatramin'ny latex, saingy miaraka amin'ny fihenam-bidy henjana izay afaka manala ny fahatsapana manintona amin'ny lamba.
Fancy dresses: fashion 2014
"Luxury be loatra" sy "fahatsarana tsotra" - ka amin'ny teny efatra dia azonao atao ny maneho ny fironana fototra amin'ny lamaody 2014 amin'ny akanjo hariva. Ireo akanjo ireo, toy ny tsy misy hafa, dia tokony hikolokolo ny vehivavy, noho izany ny lamaody 2014 ho an'ny akanjo hariva dia nisafidy karazana vato sarobidy - manga, volomparasy, mena ary maitso maitso. Ny voninahitra sy ny volamena ihany koa dia "volamena" sy volafotsy. Raha ny fombafomba amin'ny lamaody, dia mbola misy drafitra sy loko maromaro, ary koa ireo vala sy plastika izay nifindrafindra tamin'ny taona lasa. Alefaso imailaka amin ny namana endriny atao pirinty Fitantaràna hafa momba ny Shina Tohin'ny lahatsoratra Tohin'ny lahatsoratra Tohin'ny lahatsoratra Tohin'ny lahatsoratra Atombohy ny resaka Fitantarana hafa momba ny Afrika Avaratra & Proche Orient Tohin'ny lahatsoratra Tohin'ny lahatsoratra Tohin'ny lahatsoratra Tohin'ny lahatsoratra Atombohy ny resaka
Ny fomba mahazatra mahazatra dia manamboatra volo sy volom-borona, ao amin'ny taharo maro dia misy koa akanjo miaraka amin'ny lantihy antitra.
Ny lamaody amin'ny akanjon'ny gradio amin'ny taona 2014 dia mametraka eo amin'ny loha laharana ny fampiasana vatosoa mahatalanjona (organza, silk, taffeta, satin-boninahitra ambony) ary tsaramaso tsy misy fetra sy azo antoka. Amin'ny ankizilahy tanora ary amin'ny fotoana iray toy ny akanjo balsama dia ho avy amin'ny akanjo fohy 2014. Misy soso-kevitra hampiasa azy ireo ho an'ny silhouette miaraka amin'ny tendron-pandrefesana, na organza maromaro, na mamorona loko mamirapiratra, mampiasa kofehy hafa. Ny akanjo nentim-paharazana ao amin'ny gorodona dia mety misy ihany koa ireo singa ireo, plus - ny silhouette amin'ny volon'ny lava lava dia hahavita hanamaivana tanteraka ny tsy fahampian'ny ampahany amin'ny sary.
Modely Make Up 2013
Vehivavy vehivavy mody 2014
Vehivavy bloupe 2014
Kabinetra kely amin'ny goro
Ny kitay ao an-trano - ahoana no fomba hamoronana atmosfera tena tsara sy miadana?
Ny fikarakarana ny hoditra amin'ny endrika fanatanjahan-tena
Trano maitso tsy misy voankazo - recipe
Mihinam-boankazo miharo haingana be
Tonga hanohana an'i Lewis Hamilton tao amin'ny Grand Prix hongroà i Barbara Palvin
Erythrocytenina amin'ny pipisy - inona no dikan'izany?
Kulich amin'ny kiran'ny tsiro - sakafo tsara indrindra amin'ny fety fety mahafinaritra
Inona no tokony hatao amin'ny ririnina?
Taom-baovao ho an'ny ankizy
Recipe baklava amin'ny renirano
Gatsby fomba haingon-tena
Ahoana ny fomba hanosihosena ny menaka ao anaty vilany?
Mialà sasatra any Sochi